एक फिटनेस बिरुवा ब्रान्ड राजदूत बनें!
फिटनेस रबर्ट्स ब्रान्ड अफ्रिका कार्यक्रम
के तपाईलाई सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्न मनपर्छ? तपाईंसँग फिटनेस ब्लग छ? मानिसहरूलाई पैसा बचत गर्ने मद्दत गर्ने मजा लिनुहुन्छ? यदि तपाईंले यी मध्ये कुनै पनि उत्तरको हो हो भने, हामी तपाईंलाई फिटनेस छुटको बारेमा सन्देश फैलाउन मद्दत चाहन्छौं! फिटनेस रिबेट्समा हामी इन्टरनेटमा उत्तम फिटनेस सम्बन्धी कूपन र सौदा बाहिर निकाल्छौं! हाम्रो स्वास्थ्य Rebates ब्रान्ड एम्बेसडरहरूले हाम्रो सौदा साझा र हाम्रो वेबसाइट को बारे मा शब्द फैलाउन मद्दत गर्दछ।
हामी के खोजिरहेका छौ?
हामी संयुक्त राज्य र क्यानडाका व्यक्तिहरूको खोजी गरिरहेका छौं जो स्वास्थ्य र फिटनेस समुदायमा राम्रोसँग गोल छन्। तपाईसँग फिटनेसको लागि जोश हुनुपर्छ र सोशल मिडियामा सक्रिय रहनुहोस् जस्तै इन्स्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, पिन्टेरेस्ट, यूट्यूब, इत्यादि। हामी तन्दुरुस्ती, क्रसफिट, मिश्रित मार्शल आर्ट, योग, पाइलेट्स, जुम्बा, ट्रायथ्लन, म्याराथन, साइकल, बक्सिंग आदि।
मेरा अधिकारहरू एक राजदूतको रूपमा के हुन्?
फिटनेस रिबेट्स ब्रान्ड एम्बेसेडरको रूपमा, त्यहाँ धेरै प्रकारका तरीका छन् जुन तपाईं हाम्रो ब्रान्ड प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं हाम्रो सौदाहरू साझा गरेर, हाम्रो बारेमा ब्लग गरेर, व्यापार कार्डहरू हस्तान्तरण गरेर, हाम्रो जिमवेयरको साथ चित्रहरू लगाएर / लिदै आदि प्रचार गरेर हामीलाई प्रमोट गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ पदोन्नतिको लागि अनौंठो विचार छ? निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले हामीलाई ईमेल गर्नु भएको बेला हामीलाई थाहा दिनुहोस्
फिटनेस रिबेट्स ब्रान्ड एम्बेसेडर बन्न म के पाउँछु?
यदि तपाईं फिटनेस रिबेट्स ब्रान्ड एम्बेसेडर प्रोग्राममा स्वीकृत हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई एक नि: शुल्क टी-शर्ट सहित केही नि: शुल्क फिटनेस रिबेट्स गियरको साथ सुरू गर्नेछौं। हाम्रो मार्फत हाम्रो टी-शर्टहरू जाँच गर्नुहोस् परिधान पृष्ठ।
के स्वास्थ्य विवादास्पद मौद्रिक प्रायोजन प्रस्ताव गर्दछ?
यस समयमा, फिटनेस प्रतिबन्धहरूले मौद्रिक प्रायोजन प्रस्ताव गर्दैन।
के मैले प्रतिबन्ध ब्रान्ड राजदूत कार्यक्रमको स्वास्थ्यलाई लागू गर्न एक व्यावसायिक एथलीट हुनुपर्छ?
होईन, तपाईं पेशेवर एथलीट हुनुपर्दैन। हामी सबै प्रकारका खेलाडीहरू छान्छौं।
यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईं हाम्रो लागि ठूलो फिट हुनुहुनेछ, हामी तपाईंबाट सुन्न चाहान्छौं! एलेक्स मा एक ईमेल पठाउनुहोस् admin@fitnessrebates.com, इमेल विषय प्रयोग गरी "फिटनेसले ब्रान्ड एम्बेसडरलाई छूट दिन्छ"। थाहा छैन के भन्ने? हामीलाई तपाईंको बारेमा र किन तपाईंलाई फिटनेस रीबेट्स ब्रान्डको लागि एक राम्रो फिट हुनेछ जस्तो लाग्छ हामीलाई थाहा दिनुहोस्। तपाईंको सोशल मिडिया प्रोफाइलहरू समावेश गर्न नभुल्नुहोस् ताकि हामी तपाईंलाई एक हेराई गर्न सक्दछौं! हामी सबै आवेदकहरुलाई जवाफ दिन भरसक कोसिस गर्नेछौं तर प्रतिक्रियाहरूको मात्राका कारण, यो सबै केसहरूमा सम्भव नहुन सक्छ।
सोशल मिडियामा हाम्रो ब्रान्डका दूतावासहरू पछ्याउनुहोस्:
जुलाई 28, 2014 व्यवस्थापक2टिप्पणिहरु
२ विचारहरु "राजदूत कार्यक्रम"
Pingback: ब्लगर र राजदूत प्रोग्राम | स्टाइलिश मोमे
Pingback: फिटनेस राजदूत कार्यक्रम | स्टाइलिश मोमेम